Vanogaya Chibage Vokandirana Makobvu neMatete paNyaya yeKushomeka kweHupfu
Apo nyika yakatarisana nekushomeka kwehupfu, paramende nhasi yaudzwa nemamwe makambani madiki anogaya chibage kuti pane mamwe makambani mahombe ari kuendesa chibage chakaderera mutongo kunyika dzakaita seDemocratic Republic of Congo.
Izvi zvabuda paongororo yemashandiro esangano reGrain Millers Association of Zimbabwe iri kuitwa nekomiti yeparamende inoona nezvekurima.
Mukuru wekambani yeMr Brands, VaWayne Morse Brant, vaudza komiti iyi kuti pane huwori huri kuitwa nemamwe makambani ari kupihwa chibange kuti agaye hupfu hwakachipa ari kutengesa chibage ichi kunze kwenyika.
Vatiwo makambani aya ari kushandisa chibage chakachipa ichi kugadzira zvimwe zvinhu zvakaita seporiji nezvimwe zvinodhura.
VaBrant vati kambani yehurumende, yeGMB, iri kuita rurasarura uye kusvika muna Zvita yange iri kupa chibage ichi kubva kunhengo dzeGMAZ chete.
VaDavies Muhambi vekambani yeUnited Milling avo vaudza komiti iyi kuti vakadzingwa muGMAZ mushure mekupokana nehutungamiriri wesangano iri, vati vanoona sekuti GMAZ inomiriria makambani mahombe chete akaita seNational Foods neBlue Ribbon.
Vati makambani iwawa ndiwo ange achibatsirikana nezvirongwa zvese zvinotwa neGMAZ.
VaMuhambi vabvumirana naVaBrant kuti mamwe makambani mahombe anogaya hupfu ndiwo ari kutengesa chibage chakachipa kunze kwenyika izvo zvave kukonzora kuti munyika muite dambudziko rehupfu hwakachipa.
VaMuhambi vati vakazvipira kushanda neparamende kuburitsa huwori hwese panyaya dzekugayiwa kwehupfu munyika.
VaBrant vati havachina chivimbo nesangano rakaita seGMAZ ndosaka vakaumba sangano rinomirira makambani madiki neari pakati nepakati, reSmall and Medium Millers Association.
Vachipawo humbowo kukomiti iyi, mukuru weNational Foods, VaMichael Lashbrook, varamba kuti makambani mahombe akaita seyavo ari kutengesa chibage kana hupfu kunze kwenyika.
Vati National Foods yakambomira kugaya hupfu hwakachipa mwedzi wapfuura sezvo hurumende yainge isina kuva bhadhara pahupfu hwakachipa hwavainge vagaya kubva musi wa7 Zvita pakatanga chirongwa chekugaya hupfu hune muitengo uri pasi.
Asi vati vakazobhadharwa zvekuti vatanga zvekare kugaya hupfu kwakachipa.
Imwe yemakambani mahombe anove nhengo dzeGMAZ, Blue Ribbon iyo yange yakamiririrwa naVaYusu Kamau Varambawo kuti iri kutengesa chibange chakachipa kunze kwenyika.
Asi vanongororora nyaya dzehupfumi vakazvimirira, Masimba Kuchera, vaudza Stduio 7 kuti panogona kunge painye makambani ari kuita izvi.
Hurumende yakamboderedza mutengo wehupfu hwehupfu muna Zvita kubva pamadhora zana kusvika pamadhora makumi mashanu pamakirogriramu gumi. Asi hupfu hwakazowedzerwazve kusvika pamadhora makumi manomwe.
Panyaya yemamiriyoni makumi maviri nemanomwe emadhora ekuAmerica anonzi akapihwa GMAZ kuti itenge gorosi, VaLashbrook naVaKamau vabvuma kuti GMAZ yakavabatsira kutsvaga mari yekunze kuReserve Bank of Zimbabwe.
Vati ivo senhengo dzeGMAZ vaiunganidza mari vachiisa muAccount yeGMAZ uye RBZ ndiyo yakazobhadhara kambani yaivatengesera gororosi yeHolbud.
Hatina kukwanisa kunzwe kubva kugurukota rezvemari, VaMthuli Ncube kana gurukota rezvemabhizimisi nemaindasitiri, VaAmai Sekai Nzenza pamusoro panyaya iyi. Asi vaNcube vanotairisirwa kumira pamberi pekomiti iyi mangwana.
Mutangamiriri weGMAZ VaTafadzwa Musarara vanoti zvimwe zvange zvichitaurwa nemakambani aya ndezvekuda kuvasvibisa chete.